Ihe ị ga-ahụ na mpaghara Montmartre na Paris | Akụkọ Njem
Ga Paris bụ nrọ maka otutu mmadu n’ihi na obu obodo mara mma nke nwere otutu ihe inye anyi. Site na mbara ala dị na Seine gaa na Eiffel Tower ya dị egwu ma ọ bụ ebe ndị bụ akụkụ nke akụkọ ntolite dịka Notre Dame. Mana o nwekwara agbata obi mara mma nke ị ga-eleta nwayọ iji nwee obi ụtọ n'akụkụ ya niile, dịka ama ama Montmartre.
Montmartre dị na XNUMX arrondissement nke Paris, otu mpaghara nke a ma ama karịsịa maka ugwu ya, ebe Basilica nke Obi Dị Nsọ dị. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ebe ndị njem nleta na obodo Paris, yabụ anyị ga-ahụ ihe niile a ga-ahụ na agbataobi a nke Paris.
1 Akụkọ banyere Montmartre
2 Basilica dị nsọ
3 Ebe du Tertre
4 Ndị Rue de l'Abreuvoir
5 Moulin Rouge na Boulevard Clichy
Akụkọ banyere Montmartre
Mpaghara Paris a nke Montmartre bụbu ngalaba French nke dị na ngalaba Seine. Na 1860 ọ banyere Paris dị ka mpaghara anyị na-ekwu maka ya, XVIII. Agbata obi a bụ ezigbo ọnọdụ Bohemia na narị afọ nke iri na itoolu ebe otutu ndi nka no. Ọ bụ otu ebe nwekwara aha ọjọọ maka ọtụtụ ịba-azụ na ụlọ akwụna ndị e nwere. Ndị nka dị mkpa dịka Edith Piaf, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh ma ọ bụ Toulouse Lautrec bi na agbataobi a, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ bohemian na nka nke ga-eme ka agbataobi a nke Paris bụrụ onye ama ama, ebe ọ bụ na ọ bụghị ya nwere ọtụtụ ihe ncheta. Agbanyeghi na mmetụ ahụ Bohemian lara n'iyi kemgbe ọtụtụ afọ, taa ọ ka bụ ebe ndị njem na obodo ahụ.
Basilica dị nsọ
Otu n’ime ihe mbụ anyị kwesịrị ịhụ bụ Basilica nke Obi Dị Nsọ nke na-anọdụ n'elu ugwu Montmartre. Iji rute n’elu anyi nwere ike iji Montmartre funicular nke di ka tram nke na-eduru anyi ebe basilica na ebe ndi na-ese ihe na-ezukọ. Echefula na agbata obi a ka mara ezigbo mma na ebe bohemian. O nwekwara ike ịga steepụ ozugbo n'ihu basilica, yana ubi na nke anyị nwere ike isi lee panoramic anya n'elu ụlọ nke Paris. Ọ bụ ebe ndị mmadụ na-anọkarị ma na-atụgharị uche n'ihe oyiyi Paris. Basilica na-adọrọ uche maka agba ọcha ya na ụdị Romano-Byzantine ya. Emechara ya na mmalite narị afọ nke iri abụọ na taa ọ bụ otu n'ime ebe ndị kachasị eleta n'obodo. Ugwu a bụ ebe dị nsọ.
Ebe du Tertre
Gburugburu basilica enwere ụfọdụ okporo ụzọ na-atọ ụtọ. Rue du Chevalier de la Barre bụ obere okporo ámá nke ị nwere ike ịhụ basilica na nke anyị ga-ahụkwa obere ụlọ ahịa ebe ị ga-azụta ihe ncheta ndị mara mma site na Paris, yabụ na ọ bụ njedebe a chọrọ. Na nso uzo a ka odi Ebe du Tertre, nke bụ ebe ndị na-ese ihe na-ezukọ ugbua na narị afọ nke XIX. Taa ọ ka bụ ebe ọtụtụ ndị na-ese ihe na-ere ọrụ ha n'ahịa, ebe ọ bụ na ọ ka na-eme njem nleta na nleta. Nye ọtụtụ ndị, ọ dịka ihe ncheta ịzụtara ọrụ ụfọdụ ndị ọrụ nka rụrụ na ama ama a.
Ndị Rue de l'Abreuvoir
Okporo ụzọ a pụtara n'oge na-adịbeghị anya n'usoro 'Emily na Paris' ma onye ọ bụla masịrị ya, mana ọ bụ n'okporo ámá nke bụrụlarị ebe ndị njem nleta, ebe a na-ahụta ya dị ka otu n'ime ihe kachasị mma na isi obodo French. Okporo ámá a dịkwa nso na Sagrado Corazón bụ ebe ọzọ anyị na-agaghị agbaghara. Anyị nwekwara ike na-eme obere nkwụsị n’ebe dị ka isonlọ Ka Maison Rose, ebe ndi ihe nlere n’egwuregwu na-enwe obi uto. Ọ bụ ihe ọzọ iconic ebe na Paris na ị ga-ekweta na amara bụ ihe siri ike dakọtara.
Moulin Rouge na Boulevard Clichy
Boulevard a taa nwere ụlọ ahịa mmekọahụ na ụlọ ahịa nke ụdị a, yabụ na o yighị ka ọ mara mma ebe dị ka ọtụtụ narị afọ gara aga. Otú ọ dị ebe a anyị nwere ike ịchọta Moulin Rouge a ma ama, nke bụ akụkụ ọzọ kachasị ese foto nke Paris niile. Red ga-acha gị acha uhie uhie na eziokwu ahụ bụ na ọ bụ cabaret a ma ama na mpaghara ahụ, na ndị omenkà dịka Toulouse Lautrec gara leta ya iji hụ ndị ama ama nwere ike ịgba egwu. N'aka nke ọzọ, 'Café des 2 moulins' dị nso ebe onye protagonist nke Amelie rụrụ ọrụ na fim ahụ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị ma chọọ icheta ebe ndị dị na ya, ị nwere ike ịkwụsị cafe a. Will ga-achọpụta na na ụlọ ahịa kọfị Paris bụ ọdịbendị dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na mpaghara Montmartre na Paris